26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 449 Views စာ0မှတ်ချက် စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Mark Tranter ပါ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
အဆိုပါ Lego Minifigures အဖွဲ့ကပြောကြားသည်မှာ Vision သည်အသစ်စက်စက်ထုတ်ဖော်ခြင်းအတွက်အလွန်တင်းကျပ်သောဒီဇိုင်းစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို စုဆောင်းထားသောအသေးစား.
တကျိပ်နှစ်ပါးသောသစ်ကို မျက်စိကန်းသောအိတ်များ Marvel အသေးစားဓာတ်ပုံများကိုစက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့တွင်ပထမလေးလုံးမှရေးထားသောစာလုံးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ Disney+ shows: WandaVision, စွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီစစ်သား၊ နှင့် Loki ။
ထိုတစ်ဒါဇင်ထဲတွင် WandaVision (um, spoilers?) ၏နောက်ဆုံးဇာတ်ကွက်များတွင် android ၏ပေါ်ထွက်လာမှုကိုအခြေခံထားသော Vision အမျိုးအစားသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ White Vision ဟုလူသိများသောထိုဇာတ်ကောင်သည်ပုံမှန် Vision ၏အမှတ်တရများကိုရရှိခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူစစ်မှန်သော Vision ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ (မင်းနင့်ကိုစောင့်နေသလား)
စကားပြော Brick Fanatics part ၏ Lego ဒီနွေရာသီအစောပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Fan Media ပွဲမှာဒီဇိုင်းပညာရှင် Mark Tranter ကသူအလုပ်လုပ်နေစဉ်တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာရမယ်လို့ရှင်းပြခဲ့တယ် Lego White Vision ၏မူကွဲ - သို့သော်၎င်းသည်သူကိုယ်တိုင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
“ Vision ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကဒီဇိုင်းမှာအနက်ရောင်ကိုမသုံးချင်တာကိုငါအရမ်းအပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်နေလို့ပါ။ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ကြားနေ၊ ဖျော့ဖျော့အရိပ်အောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ထားချင်တယ်။ အမည်းရောင်တွေဟာနည်းနည်းလေးခက်လွန်းလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
Mind Minigure ကိုကိုယ်စားပြုရန်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အတူရွှေရောင်အရောင်များနှင့်မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရောစပ်ထားသည့်အနီရောင်ရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Mark ရဲ့မူလရူပါရုံ (စိတ်မကောင်း) နှင့်အမျှအနက်ရောင်အရိပ်အမြွက်မတွေ့ရပါ။
71031 Marvel စတူဒီယို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်စတင်မည်။ အသေးစားဓာတ်ပုံ ၁၂ လုံးအားအနီးကပ်ကြည့်ရှုပါ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်း.
← LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယိုကိုတရားဝင်ဖော်ပြခဲ့သည်
Lego 71031 Marvel စတူဒီယို Collectible Minifigures သည်ပြန်လာသည့် X-Men ဇာတ်ကောင်ကိုလှောင်ပြောင်သည် →